1, 2. (a) Tebea soronko a wɔka ho asɛm wɔ Bible mu nhoma a ɛne Daniel no mu no bi ne nea ɛwɔ he? (b) Nsɛmmisa bɛn na ɛsɔre wɔ Daniel nhoma no ho wɔ yɛn bere yi mu?
ƆHENE tumfoɔ bi ani abere pɛ sɛ okum n’anyansafo efisɛ wontumi nka ne dae a ɛkyere adwene no na wɔakyerɛ ase. Wɔtow mmerante baasa a wɔpo sɛ wɔbɛsom ɔhoni tenteenten bi no gu fononoo a adɔ yiye mu, nanso wonwu. Wɔ apontow bi ase no, nnipa ɔhaha pii hu sɛ nsa bi rekyerɛw ahintasɛm agu ahemfie bi fasu ho. Atirisopamfo atirimɔdenfo bi ma wɔde akwakoraa bi kɔto gyata amoa mu, nanso hwee nyɛ no. Onyankopɔn diyifo hu mmoa anan wɔ anisoadehu bi mu, na nea wɔyɛ ho mfonini no rekɔ so mfe mpempem pii.
2 Eyi yɛ Bible nhoma a ɛne Daniel no mu nsɛm kakraa bi pɛ. So ɛfata sɛ yesusuw nsɛm yi ho anibere so? Mfaso bɛn na nhoma a akyɛ yi betumi ayɛ ama yɛn bere yi? Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yɛhaw yɛn ho wɔ nsɛm a esisii bɛyɛ mfe 2,600 a atwam ni ho?
Daniel—TETE NHOMA MA NNƐ MMERE YI
3, 4. Dɛn nti na nnipa pii susuw adesamma daakye ho ma ɛfata?
3 Daniel nhoma no fã kɛse twe adwene si wiase tumidi so, asɛm a ɛho hia kɛse nnɛ. Ɛkame ayɛ sɛ obiara begye atom sɛ yɛte mmere a emu yɛ den mu. Nsɛm amanneɛbɔ ka kyerɛ yɛn da biara sɛ ɔhaw ahorow a emu yɛ den remene adesamma abusua no—na eyi rekɔ so wɔ nneɛma a ɛyɛ nwonwa a wɔatumi ayɛ wɔ nyansahu ne mfiridwuma mu nyinaa akyi.
4 Susuw eyi ho: Onipa anantew ɔsram so, nanso wɔ mmeae pii no ontumi nnantew akwan a ɛwɔ okyinsoromma a n’ankasa te so no so a onsuro. Obetumi de nneɛma ahorow pii a ɛma asetra yɛ mmerɛw asiesie ofie nanso ontumi nsiw pae a mmusua mu repaapae no ano. Na watumi ayɛ nneɛma pii a nnipa de di nkitaho nanso ontumi nkyerɛ nkurɔfo sɛnea wɔtra ase wɔ asomdwoe mu. Abakɔsɛm ho nimdefo, Hugh Thomas, kyerɛwee bere bi sɛ: “Nimdeɛ ne nhomasua a atrɛw no mmaa adesamma nsuaa ahosodi ne sɛnea wɔne nnipa foforo tra ase asomdwoe mu ahe biara.”
5. Dɛn na nnipa nniso ama aba mpɛn pii?
5 Nea ɛbɛyɛ na nnipa ama asomdwoe bi atra wɔn mu no, wɔaboaboa wɔn ho ano ahyɛ nniso ahorow pii ase. Nanso, nea Ɔhene Salomo kae no yɛ nokware wɔ ne nyinaa fam: ‘Onipa adi onipa so tumi ma adan no bɔne.’ (Ɔsɛnkafo 4:1; 8:9) Nokwarem no, sodifo binom kura adwene pa. Nanso, ɔhene, ɔmampanyin, anaa kankabi biara ntumi nyi ɔyare ne owu mfi hɔ. Onipa biara ntumi mma yɛn asase yi nnan Paradise sɛnea Onyankopɔn atirimpɔw kyerɛ sɛ ɛnyɛ no.
6. Dɛn nti na Yehowa nhia mmoa mfi nnipa nniso hɔ na ama n’apɛde ayɛ hɔ?
6 Nanso, Ɔbɔadeɛ no pɛ sɛ ɔyɛ nneɛma a ɛtete saa, na obetumi ayɛ nso. Ɛho nhia sɛ obisa kwan fi nnipa nniso ahorow hɔ na watumi ama n’atirimpɔw ayɛ hɔ, efisɛ “amanaman te sɛ bokiti ho nsukoko a ɛresosɔ, na wobu wɔn sɛ nsenia mu mfutumawa bi.” (Yesaia 40:15) Yiw, Yehowa ne Amansan Hene. Enti, ɔwɔ tumi a ɛkorɔn koraa sen nnipa nniso horow de. Onyankopɔn Ahenni na ebesi nnipa nniso nyinaa ananmu na ama wahyira adesamma daa. Ebia baabiara nni hɔ a wɔkyerɛkyerɛ eyi mu pefee sen Bible nhoma a ɛne Daniel no mu.
Daniel—NA ONYANKOPƆN DƆ NO YIYE
7. Na hena ne Daniel, na na Yehowa bu no dɛn?
7 Na Yehowa Nyankopɔn wɔ ɔdɔ kɛse ma Daniel a ɔde mfe pii somee sɛ ne diyifo no. Nokwarem no, Onyankopɔn bɔfo kaa Daniel ho asɛm sɛ “wɔdɔ n’asɛm sɛ.” (Daniel 9:23) Mfitiase Hebri asɛmfua a wɔkyerɛɛ ase “wɔdɔ n’asɛm sɛ” no betumi akyerɛ sɛ “wɔdɔ no kɛse,” “wobu no kɛse,” “wɔpɛ n’asɛm yiye” mpo. Na Daniel som bo yiye wɔ Onyankopɔn ani so.
8. Ɛyɛɛ dɛn na Daniel kɔɔ Babilon?
8 Ma yensusuw odiyifo yi a na wɔdɔ no no tebea soronko no ho. Wɔ 618 A.Y.B. mu no, Babilon hene Nebukadnesar betwaa Yerusalem ho hyiae. (Daniel 1:1) Ɛno akyi pɛɛ no, wɔkyeree Yudafo mmerante bi a na wɔasua nhoma yiye kɔɔ nnommumfa mu wɔ Babilon. Ná Daniel ka wɔn ho. Saa bere no na ɔbɛyɛ aberantewaa.
9. Ntetee bɛn na wɔde maa Daniel ne ne Hebrifo ayɔnkofo no?
9 Daniel ne n’ayɔnkofo Hanania, Misael, ne Asaria ka Hebrifo a wɔpaw wɔn sɛ wɔmfa mfe abiɛsa ntete wɔn mma “wonsua Kaldeafo nhoma ne kasa” no ho. (Daniel 1:3, 4) Nhomanimfo bi ka sɛ ɛbɛyɛ sɛ na eyi nyɛ kasasua kɛkɛ. Sɛ nhwɛso no, Ɔbenfo C. F. Keil ka sɛ: “Na ɛsɛ sɛ Daniel ne n’ayɔnkofo no sua Kaldeafo akɔmfo ne nhomanimfo nyansa a na wɔkyerɛkyerɛ wɔ Babilon sukuu ahorow mu no.” Enti na wɔrehyɛ da atete Daniel ne n’ayɔnkofo no ama aban adwuma.
10, 11. Nsɛnnennen bɛn na Daniel ne n’ayɔnkofo no hyiae, na mmoa bɛn na Yehowa de maa wɔn?
10 Hwɛ nsakrae kɛse a eyi yɛ maa Daniel ne n’ayɔnkofo no! Wɔ Yuda no, na wɔte Yehowa asomfo mu. Afei de, nnipa a wɔsom anansesɛm mu anyame ne anyamewa na wɔatwa wɔn ho ahyia. Nanso, ehu anka mmerantewaa Daniel, Hanania, Misael, ne Asaria. Wosii wɔn bo sɛ—tebea a na ɛsɔ gyidi hwɛ yi nyinaa akyi no—wɔbɛkɔ so akura ɔsom kronn mu denneennen.
11 Na eyi renyɛ mmerɛw. Na Ɔhene Nebukadnesar yɛ Marduk, Babilon onyame titiriw no somfo a ɔyɛ nnam. Ɛtɔ mmere bi a, na nea ɔhene no hwehwɛ sɛ wɔyɛ no nye mma Yehowa somfo koraa. (Sɛ nhwɛso no, hwɛ Daniel 3:1-7.) Nanso, Daniel ne n’ayɔnkofo no nyaa Yehowa akwankyerɛ bere nyinaa. Wɔ mfe abiɛsa a wɔde tetee wɔn no mu no, Onyankopɔn ma wonyaa “nhoma ne nyansa nyinaa mu nimdeɛ ne anitew.” Afei nso, wɔmaa Daniel tumi a ɔde bɛkyerɛ anisoadehu ne adae ase. Bere a ɔhene no yɛɛ mmerante baanan yi sɔhwɛ akyiri yi no, ohui sɛ “wɔkyɛn akurukyerɛwfo ne pɛadeahufo a wɔwɔ n’ahenni nyinaa mu nyinaa mpɛn du.”—Daniel 1:17, 20.
ONYANKOPƆN NSƐM A ƆBƆƆ NO DAWURU
12. Adwuma soronko bɛn na wɔde maa Daniel?
12 Mfe pii a Daniel de traa Babilon no, ɔsomee sɛ Onyankopɔn somafo maa nnipa te sɛ Ahene Nebukadnesar ne Belsasar. Na adwuma a wɔde maa Daniel no ho hia yiye. Na Yehowa ama kwan ma Nebukadnesar asɛe Yerusalem, bere a ɔde no dii dwuma sɛ N’adwinnade no. Na wɔbɛsɛe Babilon nso wɔ bere bi akyi. Nokwarem no, Daniel nhoma no kamfo Yehowa Nyankopɔn sɛ Ɔsorosoroni ne Nea odi “nnipa ahenni so tumi.”—Daniel 4:17.
13, 14. Dɛn na ɛtoo Daniel wɔ Babilon asehwe akyi?
13 Daniel kɔɔ so yɛɛ ahemfie adwuma bɛyɛ mfe aduɔson kosii sɛ Babilon hwee ase. Ɔtraa ase hui sɛ Yudafo pii resan akɔ wɔn man mu wɔ 537 A.Y.B. mu, ɛwom sɛ Bible nka sɛ ɔne wɔn kɔe de. Anyɛ yiye koraa no, ɔkɔɔ so yɛɛ adwuma kosii Ɔhene Kores, nea ɔkyekyee Persia Ahemman no ahenni afe a ɛto so abiɛsa so. Eduu saa bere no, na Daniel reyɛ adi bɛyɛ mfe 100!
14 Bere a Babilon hwee ase akyi no, Daniel kyerɛw n’asetra mu nsɛntitiriw too hɔ. Ɛnnɛ, ne kyerɛwtohɔ no yɛ Kyerɛw Kronkron no fã titiriw, na wɔfrɛ no Daniel nhoma. Nanso, dɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie tete nhoma yi mu nsɛm?
AKWAN ABIEN, ASƐM BIAKO
15. (a) Akwan abien bɛn na wɔfaa so kyerɛw Daniel nhoma a ɛwɔ Bible mu no? (b) Ɔkwan bɛn so na Daniel nhoma no mu abasɛm no ho betumi aba yɛn mfaso?
15 Wɔkyerɛw Daniel nhoma a ɛda nsow no wɔ akwan a ɛyɛ soronko koraa so—biako yɛ abasɛm na nea ɛka ho no yɛ nkɔmhyɛ. Daniel nhoma no mu nsɛm ahorow abien no nyinaa betumi ahyɛ yɛn gyidi den. Ɔkwan bɛn so? Abasɛm no—nea emu da hɔ fann wɔ Bible mu no mu biako—kyerɛ sɛ Yehowa Nyankopɔn behyira wɔn a wokura wɔn mudi mu ma no no na wahwɛ wɔn. Daniel ne n’ayɔnkofo baasa no gyinaa sɔhwɛ ahorow a ɛde wɔn nkwa too asiane mu ano. Ɛnnɛ, sɛ wɔn a wɔpɛ sɛ wɔkɔ so di nokware ma Yehowa no susuw wɔn nhwɛso no ho a, ɛbɛhyɛ wɔn den.
16. Dɛn na yesua fi Daniel nhoma no mu nkɔmhyɛ ahorow no mu?
16 Daniel nhoma no mu nkɔmhyɛ nsɛm no hyɛ gyidi den bere a ɛkyerɛ sɛ Yehowa di kan hu nsɛm a esisi wɔ abakɔsɛm mu mfehaha pii—mfe mpempem pii mpo no. Sɛ nhwɛso no, Daniel de wiase tumi horow a na ɛwɔ hɔ fi tete Babilon so besi “awiei bere” yi no sɔre ne wɔn asehwe ho nkyerɛkyerɛmu ma. (Daniel 12:4) Daniel dan adwene kɔ Onyankopɔn Ahenni a ɛhyɛ Ne Hene a wapaw no ne ne mfɛfo “ahotefo” nsa so de kyerɛ sɛ ɛne nniso a ɛbɛtra hɔ daa. Saa nniso yi bɛma Yehowa atirimpɔw ma yɛn asase yi abam koraa na ama wɔahyira wɔn a wɔpɛ sɛ wɔsom Onyankopɔn nyinaa.—Daniel2:44; 7:13, 14, 22.
17, 18. (a) Ɔkwan bɛn so na Daniel nhoma no a yɛbɛhwehwɛ mu yiye no bɛhyɛ yɛn gyidi den? (b) Asɛm bɛn na ehia sɛ yebua ansa na yɛafi ase asua Bible nkɔmhyɛ nhoma yi?
17 Anigyesɛm ne sɛ Yehowa nkora nsɛm a ebesisi daakye ho nimdeɛ so. Mmom no, ɔne nea “oyi ahintasɛm adi”. (Daniel 2:28) Sɛ yesusuw nkɔmhyɛ ahorow a wɔakyerɛw wɔ Daniel nhoma no mu mmamu ho a, ɛbɛhyɛ gyidi a yɛwɔ wɔ Onyankopɔn bɔhyɛ ahorow mu no den. Yebenya gyidi kɛse sɛ Onyankopɔn bɛma n’atirimpɔw abam pɛpɛɛpɛ wɔ bere pɔtee a wahyɛ no mu ne ɔkwan a ɔpɛ so.
18 Wɔn a wɔde koma pa sua Bible mu nhoma a ɛne Daniel no gyidi bɛyɛ kɛse. Nanso, ansa na yebefi ase ahwehwɛ nhoma yi mu akɔ akyiri no, ehia sɛ yesusuw adanse a ɛkyerɛ sɛ nhoma yi yɛ nokware no ho. Akyinnyegyefo bi akasa atia Daniel nhoma no, na wɔaka sɛ wɔkyerɛw nhoma no mu nkɔmhyɛ ahorow no ankasa wɔ bere a enyaa mmamu no akyi. So nea akyinnyegyefo yi ka no yɛ nokware? Ti a edi hɔ no bebua asɛm yi.
• Dɛn nti na Daniel yɛ nnɛ bere yi nhoma?
• Ɛyɛɛ dɛn na Daniel ne n’ayɔnkofo no de wɔn ho kɔhyɛɛ Babilon aban adwuma mu?
• Adwuma soronko bɛn na wɔde maa Daniel wɔ Babilon?
• Dɛn nti na ɛsɛ sɛ yetie Daniel nkɔmhyɛ no?
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 4]
[Mfonini nkutoo na ɛwɔ kratafa 11]
Share Share Daniel Nhoma no ne Wo
dp ti 1 kr. 4-11